Steefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda'u jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Steefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda’u jedha
Steefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda’u jedha
‘Artificial intelligence’ maashinoota ykn meeshaalee (fkn roobootota) akka namaatti yaaduu fi waa hubachuu danda’aniidha. Aliens ammoo wontoota lubbuu qaban kan akka namaatti yaaduu dandan ykn qarooman tarii dachii nuti irra jiraannuun ala (samii keessa ta’uu danda’a) jiraachuun isaanii nimala jedhamanii kan shakkamaniidha.
Steefen Hokiing, saayinsistiin beekamaan, wolitti dhufeenyi ‘Artificial intelligence’ fi aliens dachii irraa dhabamiinsa sanyii namaatiif sababa guddaa ta’uu akka malaniidha kan akeekkachiisu. Steefen Hokiing dhalli namaa meeshaalee ykn maashinoota qaroo akka namaatti yaaduu danda’an uumuun isaa gama birootiin lafa irraa dhabamiinsuma isaanii (sanyii namaa) saffisiisaa akka jiruudha kan BBC itti hime. Steefen Hokiing, kan ufumaa isaatuu haasayuuf meeshaalee qarotti dhimma bahu, sanyiin namaa meeshaalee hedduu qaroo kan tarii boru abshaalummaan nucaaluu danda’an uumuun keenya dogogora guddaadha jedha. Meeshaalee kanniin ammaaf ilma namaati kan tolchutti jiru, ‘meeshaaleen ykn maashinoonni qaroon kunniin gara boodaatti ufii uftolchuu, saffisa guddaan ufgeeddaruu danda’u,’ jechuun soda isaa ibse. Rakkon guddaan, Stefen yoo soda isaa ibsu, gaafa meeshaaleen kunniin ufii isaaniitii uftolchuu ykn uf-fooyyessuu eegalan too’annaa fi hubannaa ilma namaatii ala bahuu danda’u. Ilmi namaa waan hojjatu irratti daangawaa waan ta’eef isaan faana saffisa wolfakkataan tankaarfachuu isa dhiba, iggitiin baayolojiin irratti gate jira waan ta’eef. Akka Steefen Hokiingitti dhalli ilma namaa maashinoota qaroo kanniiniin nicaalama, ni injifatama, duubatti gatama. Kuni balaa guddaa dhala.
Uumaa meeshaalee qaroo Cleverbot app ‘artificial inelegance’ kan ta’e tokko gama isaatiin meeshaaleen qaroon ilma namaa dachii irraa dhabama taasisuu danda’ u sodaa jedhu kan hinqabne ta’uu isaa BBC itti hime. Maashinoonni guutummatti qaroo ta’an ‘full artificial inelegance’ yeroo ganna 10 hincaalle keessatti uumamuu danda’u. Meshaaleen kunniin tajaajila daangaa hinqabne ilmanamaaf laatu moo ilma namaa ni irraanfatu, dalgatti gatu, tarii nigalaafatu waan jedhu ammatti beekuu kan nama dhibu ta’uu dubbate.
Wolumaan ilaaluuf deeman yaalii fi hujiin keenya kan sanyii namaa guddisu moo balleesu ta’u isaa. Waan uumnu hundakeessatti balaa dhufuu malu fagotti arguun fala barbaaduuf nama qarqaara.
fundura dhala namaa
Previous articleNiitii fi ilmoon Al-Bagdaadii Libaanos keessatti qabamuun isaanii ifa godhame
Next articleDaldalli meeshaalee qulqullina hinqabnee Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ta’eera